Ikhaya UMPHATHI we-FOOTBALL Nuno Espirito Santo Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts
I-LB inikeza iNdaba Egcwele yoMphathi Webhola owaziwa kakhulu ngegama lesidlaliso "O Substituto". Indaba yethu ye-Nuno Espírito Santo yobuntwana kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube manje. Ukuhlaziywa kuhilela isizinda somndeni wakhe, indaba yokuphila ngaphambi kokudumo, ukuphakama kwendabuko, ubuhlobo nokuphila komuntu siqu. Ngaphezu kwalokho, amanye amaqiniso angabonakali awaziwa ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngokusebenza kwakhe kokuphatha ngeWolverhampton Wanderers. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka Biography sikaNuno Espírito Santo okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
Nuno Espirito Santo Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts-Isiqalo sokuphila
Ukuqala, igama lakhe eligcwele nguNuno Herlander Simoes Espírito Santo. UNuno wazalwa ngosuku lwe-25th lukaJanuwari 1974 eSão Tomé nasePríncipe, isizwe esiyisiqhingi sase-Afrika esise-Equator eGulf of Guinea, e-Central Africa.
UNuno wazalwa njengomntwana onamahloni futhi onokuthula kubazali bakhe abangamagama abo ahlala engaziwayo. Kodwa-ke, ekhulayo, wathola amandla akhe eqiniso njengoba ayehlanganyela emidlalweni yebhola leSa Tome football. UNuno ubonwe njengomuntu ongenamandla futhi onamandla futhi othanda ukusiza abanye ngisho nangomfana omncane, ubona izinto ngaphandle kokubandlulula.
Ekuqaleni kwakhe ngesikhathi uNuno ekhuluma nge-10, umama wakhe nobaba bakhe basuka eSao Tome. Umndeni kaNuno Espirito Santo kwakudingeka uthuthele ePortugal ukuze uthole isimo sezomnotho esingcono. Lapho befika, bahlala eSanto António da Charneca, ipharadesi yomasipala kumasipala waseBarreiro, ePortugal. Yilapho uhambo lwakhe lomsebenzi lwaqala khona ngempela.
Nuno Espirito Santo Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Umsebenzi Wentsha
Ngonyaka we-1985 ngesikhathi engu-11, uNuno waqala ibhola lakhe eqenjini lebhola lebhola elibizwa ngokuthi i-Santoantoniense. Njengoba isikhathi siqhubeka, uNuno waqhubeka namanye amaqembu. Wabonwa ngontanga njengomuntu ojabulayo ozohlala elula ukuthola ukuvumelanisa nanoma imuphi imvelo enikeziwe yena wadlala ibhola lakhe.
Umsebenzi kaNuno osemusha waba phakathi kwe-1985 kuya ku-1992 namaqembu amane ahlukene ase-Portuguese. Njengomfana osemncane, wayenakho ukuzimisela ngobuqotho ukwenza amaphupho akhe abe ngumgcini wezinhloso ophumelelayo agcwaliseke. Lokhu kwabonakala phakathi nezinsuku ayezidlala nazo I-Santoantoniense, i-Quimigal, i-Caçadores Torreenses ne-Vitória Guimarães lapho ephela khona umsebenzi wakhe wobusha.
Nuno Espirito Santo Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Ukuhlangana noJorgie Mendes
Njengesikhathi sokubhala, abalandeli bebhola abalandela ngempela umdlalo bazokwazi ubuhlobo phakathi kukaNuno noJorge Mendes. Lokhu kuyiqiniso ngoba bobabili ama-pals akwazi ukuhlukaniswa. Manje ake sikutshele indlela abahlangana ngayo.
Ukuguqulwa kwenhloso kaNuno futhi kamuva umsebenzi wezokuphatha waqala kwi-nightclub eyaziwayo yasePutukezi ngonyaka ka-1996. Ngobusuku obusisiwe, uNuno wahlangana noJorge Mendes owayengumphathi we-DJ kanye nevidiyo esitolo sesikhathi esithile. Khona-ke, wayengacabangi ngenhloso yokungena ebhizinisini le-ejenti yebhola. Lesi yisikhathi lapho uNuno, umgcini we-22 oneminyaka engu-19 ubudala efuna kanzima ukuze akwazi ukuyenza ibe mkhulu kulo mdlalo. Ngalobo busuku, ingxoxo ekhunjulwayo yaqala phakathi kukaJorge noNuno abavele bahlangane kuleli qembu.
Nuno Espirito Santo Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Ukwenza uJorgie Mendes
Uthi bewazi?… Ngobo busuku, ngemuva kokukhuluma ngokwanele ngamathuba, u-Jorge Mendes wathola ukubiza kwakhe, ithuba lokuhweba ibhizinisi le-football. Okokuqala, waqinisekisa uNuno ukuthi amqashe njengomklayenti wakhe wokuqala owavuma. Bobabili kwakudingeka bahlele izinto zabo zesenzo ngaphambi kokushiya i-nightclub.
Ngosuku olulandelayo, uJorge wagxilisa uNuno amahora amabili nesigamu ukuya eDemortivo La Coruna eSpain ngenhloso yokuhlangana nomengameli webhola lebhola lebhola. Lapho efika, uJorge waqinisekisa umengameli weqembu ukuthi uNuno uzokwazi ukunikeza izizathu zokuthi kungani iqembu leSpain kufanele lizithenge. Ngemuva kokuxoxisana okuphumelelayo, i-Deportivo La Coruna yamukele isivumelwano sakhe. Lesi yisikhathi ngesikhathi uJorge Mendes eqhubekele phambili ukuvula inkampani yakhe ye-football agent manje eyaziwa ngokuthi GestiFute. GestiFute kusekude kakhulu kwezinsizakalo ze-agent ezinhle kakhulu zabaseball. Kusukela ngaleso sikhathi, bobabili baba abangane abangcono kakhulu.
Njengesikhathi sokubhala, bobabili uNuno noMendes bajabulela ukuvakasha okusha ndawonye kuWolf. Namuhla, uJorge Mendes uye wahlinzeka abaningi abadlali beNuno, ikakhulukazi abadlali bePutukezi. Namuhla, ngokusobala u-agent enamandla kunazo zonke emhlabeni webhola lezinyawo ngamaklayenti afaka phakathi Jose Mourinho, Rui Patricio, Helder Costa, Cristiano Ronaldo, UJames Rodrguez, João Moutinho njll
Nuno Espirito Santo Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- I-Mourinho Desciple
Ngemuva kokuchitha iminyaka engu-5 namaqembu aseSpain, uNuno wabuyela ePortugal ukuze ajoyine iFin Porto. Lapho waqala Jose Mourinho umfundi weqiniso, umuntu ongathanda ukufudumala ibhentshi kuJoseph futhi uzokwenza ngokucophelela lapho ebizwa.
UNuno wayeyilungu elihlonishwayo lethimba lasePorto, umuntu Mourinho ethembekile. EPortugal, uNuno wabizwa ngokuthi u-O Substituto okusho ukuthi "The obambele". Naphezu kokufudumala ibhentshi, imizuzu yakhe embalwa yokudlala yaba usizo Jose Mourinho's I-Porto inqoba iYurophu phakathi nenkathi ye-2003 / 2004.
UNuno njengoba ephawula ngezansi wathola i-Champions League ngaphansi kukaJose Mourinho ku-2004 njengomdlali wezinyawo uPolto.
Ukuqeda Umsebenzi wakhe wokudlala: U-Nuno ngesikhathi sokugcina umsebenzi wakhe wavuma ukuchitha iminyaka eyengeziwe ngokuboleka imali kunokuhlala unomphela eqenjini. Ngesikhathi se-career yakhe ye-18 emazweni amathathu ahlukene, iSao Tome ubelethe umgcini wezinqola kanti umphathi wamanje wadlala imifino ye-199 kanye ne-102 kulabo ababebolekwe esikhwameni sesibili saseSpain. Imemori yakhe enhle kakhulu njengomgcini wezinhloso ngeke ihlale i-Champions League ukunqoba kwayo e-2004.
Nuno Espirito Santo Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Umsebenzi Wokuqala Wokuphatha
Ngemuva kokuthatha umhlalaphansi, uNuno wangena ekuphathweni kwebhola eqala ngeqembu lebhola lezinyawo ePortugal Rio Ave. Ngenxa yomngane wakhe kanye no-Jorge Mendes, wavuka ngokushesha.
UJorge Mendes ngokusebenzisa ukuxhumana kwakhe nomthelela kwakuyisithunywa kwizithuba eziningi zokuphatha ezingenamsebenzi. Ingxenye yeqhinga lakhe lokuxoxisana lihilela ukwenza amaklayenti akhe abuyele ekuthengeni amakilabhu ngaphandle kokuba iklayenti lakhe lokuphatha libekwe njengomphathi. Kungenxa yalokhu okubandakanya izidakamizwa uMendes uthole uNuno umsebenzi wakhe eValencia lapho asebenza nomunye wabafowabo baseNewville.
U-Nuno wabizwa ngokuthi i-La Liga iMenenja yeNyanga izikhathi ezintathu ngaphambi kokunquma ukushiya i-29 November 2015. Ngemuva kokuphathwa kukaValencia, uMendes uvikele esinye isabelo sokuphatha sikaNuno e FC Porto. Ngemuva kwenkathi engenayo i-silverware ngokuphelele, uNuno wayekhululekile emisebenzini yakhe. Futhi, walindela isamba esilandelayo sokuphatha esivela ku-Mendes.
Nuno Espirito Santo Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Waba kanjani umphathi weWolves
UMendes uphinde wabona ithuba lokuletha umngani wakhe uNuno kuWolverhampton ngemuva kokungavumelani nomphathi wePoint Wolves uPaul Lambert. Manje sikutshela ukuthi konke kwenzeka kanjani.
UWolbert Lambert u-Wolves uvele engavumelani nomnikazi weBillionaire weqembu (Fosun) ngokuqoka uMendes njengenhloko yokudlulisela iqembu.
ULambert akavumelani nokudluliselwa kweqembu eliphathwe yi-super-agent Jorge Mendes owayengumngane osondelene noMnikazi wezinkulungwane zabakwa-Wolves uFosun futhi wayengumuntu oye wanquma wonke amadili weqembu.
Uthi bewazi??… Umnikazi wezilwane waseShayina Funso (inhlangothini engakwesokunxele, indima yangaphambili) unike uJorge Mendes amandla okuphatha kokubili isidlali nokuqashwa kwabaphathi. Ukuthinta okungathandeki kukaLambert kwenza izinsuku zakhe zibalwa neqembu eliphakathi.
ULambert uphonswe ngoMeyi 2017 naphezu kokuthatha ithimba leWolves ukunqoba emjikelezweni wesine we-2016-17 FA Cup, ukunqoba i-2-1 ngokumelene neLiverpool e-Anfield. Ngo-31 May 2017, uNuno Espírito Santo wakhethwa njengomphathi we-Wolves.
Nuno Espirito Santo Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Ukuqondisa
Isenzo sikaNuno esenza abadlali abaningi basePutukezi ngaphansi kukaJorge Mendes bavumelana nokujoyina iWolf. I-wave enkulu kakhulu yafika ngenkathi ngemuva kokuba uNuno Espírito Santo eholele iqembu Premier League emva kweminyaka eyisithupha engekho. Lokhu kwenzeka ngesikhathi sakhe sokuqala njengomqeqeshi wekhanda laseWolverhampton.
Iqembu lizuze ukunyuswa kwabo ngemidlalo emine esele kule nkathi. Baqinisekiswa njengabadlali abanezemidlalo emibili ukuze bangene. Ngesikhathi esilungiselela inkathi yeNkulumbuso ye-Premier League 2018-2019, uJorge Mendes uvikele abadlali bePutukezi okungukuthi; UDiogo Jota, Joao Moutinho, URuben Vinagre futhi Rui Patricio singene eqenjini.
Lokhu kuhlasela kwesiPutukezi kwakuthandeka uNuno ongakaze azame ukufihla isikweletu sakhe ku-superagent. UNuno njengesikhathi sokubhala unomunye wamaqhinga amahle kakhulu e-football ku-Premier League.
Nuno Espirito Santo Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Imininingwane yomuntu
UBruno Alves, umlingani weqembu likaNuno eminyakeni yakhe yokugcina ePorto wachaza ngokuthi 'induna ngaphandle kwesigqoko'. Encwadini yomuntu siqu, uNuno wayengumuntu ojabule kakhulu owazi ukugqugquzela ozakwabo. Wayehlale ekulungele ukulalela nokusiza lapho ebizwa. Emuva ngaleso sikhathi emsebenzini wakhe, lapho othile ehluleka, uNuno uhlale eqala ukukhuthaza. Uma omunye wabadlali bakhe behla, uzoba ngowokuqala ukuzama ukumvuselela. Naphezu kwakho konke lokhu, wavuma ukuba ngumshini wokufudumala ebhentshini nje ukuvumela omunye umgcini wezinhloso ukuba ajabule.
Osebenza nabo eqenjini lakhe babezogijimela ukwamukela uNuno lapho bebhola umgomo. UJoseph Mourinho wake wakubeka ngokucophelela. "Uma unayo uNuno," uthe. "Akudingeki ukhathazeke ngegumbi lokugqoka."
Ekugcineni, ubuntu bukaNuno buphinde bufakwe uhlaka lokuziphatha olwake lwalubeka emsebenzini wakhe siqu. Ngokwesibonelo, ku-2010, uHulk noCristian Sapunaru bathola ukuvinjelwa kwezinyanga ezine zokulwa nabaphathi ekhaya labamelene noBenfica abababalayo. Ngesikhathi abanye abadlali nabalandeli bebagxeka, uNuno wavikela abadlali bakhe. Lesi senzo saholela emazwini akhe amanga; Somos Porto okushiwo (Singabantu basePorto).
"Akekho ozosihlupha endleleni yethu," waphala. "Akekho, akukho ukungabi nabulungisa okususa inyunyana yethu. Singabantu ePorto futhi sizohlale sihlala "
KuNuno, amalungelo kanye nokungalungi kwalesi sigameko kwakunesibili. Ukuvikela leli qembu nokumelela izithandani zakhe kwakubaluleke kakhulu enhliziyweni yakhe enomusa.
Nuno Espirito Santo Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Ukungapheleli
Naphezu kwezindleko eziningi egameni lakhe, u-Nuno usevele wabonisa izinga lokungafezeki kulo mdlalo. Lokhu kwenzeka ngesikhathi ecasula uNeil Warnock owayeseke wamshaya uNuno njengomfana 'ukuhlazeka'. Note: Ngaphambi kokuphikisana kwabo, uWarnock wajabula kakhulu ngokuba noNuno eCardiff.
Kwenzeka kanjani! UWarnock wake wazizwa ehlushwa njengoba elahlekelwa izinhlawulo ezimbili zokugodla neqembu lakhe laseCardiff owayeselinye iqhaza elibhekene noNuno. Ngemuva komdlalo, wazizwa edumazeke kakhulu nguNuno, esikhundleni sokuthi agijimise izandla zakhe agijimela emgqeni kanye nabasebenzi bakhe ukugubha njengokungathi usanda kunqoba iNdebe yoMhlaba yeFIFA.
Lapho evuma iphutha lakhe, uNuno wagijimela ku-Walnock othukuthele ngokubamba ngesandla, ngalesi sikhathi kwase kuphuzile. Wathola i-anti-69 eneminyaka engu-17 ubudala ukuthi angamukeli. UWarnock wabe esebonakala ngokuphindaphindiwe etshela uNuno f ** k off.
Buka ividiyo yokuhlaselwa ngezansi;
UNuno, namanje, usaxolisa ngemuva komdlalo, ethi imizwelo yakhe yenze ngcono. Ukhulume masinyane kubathatheli ukuthi uzobona umphathi othukuthele ayemonile. Lapho ezwa lokho, uWarnock waphendula ngokuthi:
"Angikunikezi F ** K ukuthi uNuno uthi. Ngeke ngamukele ukuxolisa kwakhe. Ukuntuleka kweklasi kanye nokuhlazeka okuphelele. Ngasebenzisa amagama aqinile futhi ngangisho wonke wabo. Kumele afunde ukuthi ebhola laseBrithani unemikhuba kanye nekilasi elincane uma uqoqe umdlalo. Angicabangi ukuthi ngizoya ehhovisi lami kuze kube yilapho esehambe. Angifuni ukumbona namhlanje uma ngithembekile. Ngacabanga ukuthi ngumdlalo omuhle futhi akudingeki ukuba uqede kanjalo. "
Nuno Espirito Santo Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Ubudlelwano
I-Peharbs, abalandeli abaningi bebhola bacele umbuzo; Ubani umfazi noma intombi kaNuno Espirito Santo?. Iqiniso litsheliwe, ngesikhathi sokubhala lesi siqephu, impilo yobuhlobo bukaNuno emakhasini akhe okuxhumana nabantu abathinteli ulwazi olwakhe empilweni yakhe yangasese.
Njengesikhathi sokubhala lesi sihloko, WhoDatedWho uye waqinisekisa ukuthi ayikho amarekhodi mayelana nokuphila komshado kaNuno Espírito Santo.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda iNuno Espirito Santo Indaba Yobuntwana kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
Ignatius Jacob NgoMashi 17, 2019 E-12: 45 pm
Ngiye ngakhathazeka kakhulu nguNuno kanye neqhinga lakhe elihle lokugijima kwebhola .Ukuqeda i-FA Cup quarter final ngaseMelika kwaqinisa ukukholelwa kwami. Indlela izimpisi ezedlala ngayo zazivelele kakhulu futhi zifanelwe kakhulu ukunqoba .. ngithokoza kakhulu ngoNuno nabadlali bakhe abasebenza kanzima. Ungumphathi omuhle kakhulu, umgqugquzeli omuhle futhi umqeqeshi. Izifiso zami ezinhle zokuphumelela okunye.